780 cunug oo hal maalin loogu waqlalay dalka Gerogia: VIDEO
Carruur gaareysa ilaa 780 cunug ayaa waqlal yaab leh oo u muuqda qaab silic ah ayaa waxa uu ka dhacay dalkaasi Georgia. Warbaahinta caalamka ayaa waqlalkan hadalay haysa.
by calanka —	January 31, 2017 —	Video
Digaagad baahan oo doolli nool ka boojeysay bisad dharagsan: VIDEO
Digaagad baahan oo ku nool xaafadda Choctaw, gobolka Oklahoma ee dalkaasi Mareykanka ayaa doolli nool ka boojeysay bisad dharagsan taas oo ku ciyaareysay doolliga.
by calanka —	January 30, 2017 —	Video
19 dabaq oo sakanno gudohood dhulka la dhigay dalka Shiinaha: VIDEO
Magaalada Wuhan ee bartamaha dalkaasi Shiinaha waxaa sakanno gudohood lagu burburiyay 19 dabaq oo saf ku jira kuwaas oo ay qarxiyeen injineero guryaha dhisa si halkaasi loga dhiso dhismayaal cusub.
by calanka —	January 28, 2017 —	Video
Diyaarad dhoolletus sameyneysay oo kus soo dhacdaydalka Australia: VIDEO
Dalkaasi Australia waxaa kusoo dhacday diyaarad nooceedu yahay Grumman G-73 Mallard in Australia taas oo dhoolletus sameyneysay, waxaana dhacdadani toos u daawayay boqollaal dad ah.
by calanka —	January 27, 2017 —	Video
Barnaamij cajiib ah oo lagu soo siyaadiyay magaalada Muqdisho: VIDEO
Caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdishowaxaa waxaa ka jira barnaamij loogu tala galay ine ay ku bogsadaan dadka qaba xannuunada qarracanka ama naxdinta reebta huq iyo ciilka ee ka dhasha falalka kufsiga iyo colaadaha.
Meydadka dableydii weerarka kusoo qaaday hotel Dayax oo lasoo bandhigay: SAWIRRO
Dhalinyaradii hubeysneyd ee weerarka bahalnimada ah saakay kusoo qaaday hotelka Dayax ayaa lasoo bandhigay muuqaaladooda, kuwaasi oo da’doodu ay ka yar tahay 20 sano jir.
by calanka —	January 25, 2017 —	Sawirro
Doorashooyinka Somaliland oo dib loo dhigay abaarta darteed: VIDEO
Soorashadii maxweyne ee lagu waday in ay ka dhacdo Somaliland bisha Marso 28-keeda ayaa dib loo dhigay kaddib muran muddooyinkan ka dhex aloolsanaa xisbiyada maamulkaasi kuwaas oo ugu dambeyn go`aan ku gaaray in dib loo dhigo ilaa iyo 10 Oktobar ee sanadkan.
by calanka —	January 25, 2017 —	Video
Sawirro dheeraad ah oo laga soo qaaday hotelkii saakay la weeraray ee Dayax
Qaraxyo iyo weerar toos ah ayaa waxaa saakay lala beegsaday hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho kaas oo wali uu socdo howlgalkiisa, dabley hubaysana ay gudaha ugu jiraan.
Jawiga goobta ay qaraxyadu ka dheceen saakay iyo rasaas wali la maqlayo: SAWIRRO
Haweeney nasiib daran oo gaari ku kala gooyay bartamaha magaalada New York: VIDEO
Magaalada New York waxaa maalmo ka hor ka dhacay shil fool-xun kaas oo gaari kuwa lagu qaado carruurta iskooleyda ah uu ku kala gooyay haweeney wadada goyneysay. Darawalka ayaa la sheegay in uusan arkin haweeneydan oo wadada iska soo gashay.